Emory University - Study muna USA. EducationBro - Study Kunze Kwenyika Mag
guta : Druid Hills
inotangwa : 1836
Musakanganwa kuti kurukura Emory University
Kunyoresa pa Emory University
Emory University ndiyo yunivhesiti voga kuti rakaumbwa 1836.
Muripo mazai ari Emory University ndivo $48,000 (Aprox.).
Emory University iri muna weChicago Druid Hills pedo Downtown Atlanta. Chekutanga- uye-gore rechipiri vadzidzi vanosungirwa kugara kembasi, asi vazhinji vadzidzi vanosarudza pamusoro kembasi kwemakore ose mana. The Programming Student Council anoronga zviitiko uye zvesimba rose gore uye akauya entertainers uye vaimbi akadai Tracy Morgan, Sean Kingston uye Guster kuti kembasi mumakore apfuura. A yakakurumbira sangano pakati vechikoro Volunteer Emory, izvo rinotarisira omunzanga basa. The Emory Makondo vane kusvika 20 NCAA Division III varsity zvikwata uye vari ichinyatsozivikanwa yavo ibudirire kushambira uye Diving chikwata. Kuwedzera varsity mitambo, vadzidzi vose vanofanira kutora kosi maviri dzidzo chaiko. Pane raibudirira rechiGiriki vomunharaunda Emory nevanhu vanoverengeka Fraternity uye sorority zvitsauko.
Emory rakakamurwa zvikoro mapfumbamwe uye mumakoreji, mana iyo kushumira undergraduates uye kudzidza. zvirongwa Emory kuti akapedza kudzidza zvinosanganisira zvikuru yandaipuwa Goizueta Business School, School Mutemo, School of Medicine, Nell Hodgson Woodruff School of Nursing uye Rollins School of Public Health. “Dooley zvaJehovha Week,” tsika kuti inoitika ose gore, anonzi nokuti Dooley, mumwe marangwanda uye “Ishe Misrule” uyo anoramba vakanyura mune Emory ngano. vaimbove U.S. President Jimmy Carter, chiremba uye CNN mukuru utano dzomupepanhau Sanjay Gupta uye mumiriri Nobel Peace Prize weNobel Desmond Tutu vose vakadzidzisa pana Emory.
Emory College of Arts uye Sciences
Graduate uye Professional Schools
Emory College rakaumbwa 1836 muna Oxford, Georgia nokuda Methodist Episcopal. The kukoreji ainzi mune kukudzwa vakaenda Methodist bhishopu John Emory. Ignatius Alphonso Vashoma aiva purezidhendi wokutanga yekoreji wacho. mu 1854, ari Atlanta Medical College, Aifananidzira Emory University School of Medicine, rakaumbwa. On April 12, 1861, neAmerican Civil War akatanga. Emory College yakavharwa muna November 1861 uye zvose vadzidzi dzayo wechi. In mukupera 1863 hondo akauya Georgia uye kukoreji waishandiswa sezvo chipatara uye gare gare imwe dzimbahwe nokuda Union Army. The yunivhesiti yakabereka vakuru vakawanda vaiva muhondo, kusanganisira General George Thomas Anderson (1846C) uyo akarwa munenge hondo dzose guru rokumabvazuva yemitambo. Makumi matatu nemashanu vadzidzi Emory vakarasikirwa noupenyu hwavo uye rakawanda ritenderane yakaparadzwa munguva yehondo.
Emory College, sezvo pamwe yose Southeastern United States, vaitamburira kukunda zvemari kuparadzwa panguva Zvokuvakazve Era. mu 1880, Atticus Greene Haygood, Emory College President, akapa kutaura tichimuonga mugumo youranda muUnited States, izvo vakabata pfungwa George I. Seney, mumwe New York bhenga. Seney akapa Emory College $5,000 kubhadhara zvikwereti zvayo, $50,000 pakuvaka, uye $75,000 asimbise andipa chipo idzva. Munguva 1880s, mabikirwo dhipatimendi kwakatangwa Isaka Stiles Hopkins, mumwe polymath purofesa Emory College. Hopkins akava purezidhendi Georgia Institute of Technology rokutanga 1888. dzakawanda mudzidzi Emory University wokutanga, Yun Chi-Ho, kudzidza mu 1893. Yun akava enyika anokosha nemumiriri muKorea uye ndiye muvambi “Aegukga”, rwenyika reRepublic of Korea.
On August 16, 1906, ari Wesley Memorial Hospital uye Chikoro Chokudzidzisa Ravanamukoti, Papera kunzi Nell Hodgson Woodruff School of Nursing, rakavambwa. mu 1914, ari Candler School of Theology rakavambwa. mu 1915, Emory College kutamiswa yemo Atlanta uye akanga rechartered sezvo Emory University pashure kubvuma nyika ngaamuitire kubva Asa Griggs Candler, muvambi The Coca-cola Company. The Emory University School of Mutemo yakatangwa 1916. Kubva 1920s kuburikidza 1970, Emory University zvakasimbisa mukurumbira wayo sezvo chevanorwara remunharaunda kuti akabayira dzidzo yakasimba mushonga, mutemo, yezvouMwari, bhizimisi, uye akarurama hwemashiripiti.
iye weboka Emory nhoroondo hwachinja muna November 1979 apo Robert Winship Woodruff uye George Waldo Woodruff akapa kupfungwa ane chipo $105 mamiriyoni Coca-cola unganidza. Panguva ino akanga ari kupfuura chipo chete chero nesangano dzidzo yepamusoro munhau American, uye akaita kwakakanganisa Emory kuti dzaizotungamirira anotevera maviri emakore, boosting yunivhesiti pamusoro nokudyidzana American tsvakurudzo mumayunivhesiti.
Somumwe uchitsanya-kukura tsvakurudzo mumayunivhesiti muUnited States muzana remakore rechi21, Emory University akagadza National mukurumbira pamusoro simba nyanzvi nebudiriro ayo fakaroti uye vadzidzi, ayo zvikuru rakava nyanzvi zvikoro, kuzvipira kwenguva yakareba kuti unyanzvi uye sayenzi, uye kuvapo cheka-kumucheto tsvakurudzo nzvimbo anopfuura makumi manomwe kuti vari kutaura kukuru matambudziko evanhu. Emory zvava ukama ayo munharaunda, nokusika pedyo Links pamwe Atlanta kwakaita nharaunda, kumakiriniki, zvipatara, masangano nonprofit, uye boardrooms. Pokugara kukura kwayo, Emory kwave kuchiita kusanduka chaiko kuti yakawedzera mukirasi uye tsvakurudzo nzvimbo. Achangobuda kuwedzera kune ritenderane zvinosanganisira zvivako yokutsvakurudza kenza, anorapa achishandisa mitemo tsvakurudzo, nesayenzi computation, masvomhu uye sayenzi, tsvakurudzo mushonga, uye achiita hwemashiripiti
Unoda kurukura Emory University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Emory University musi Map
Photos: Emory University pamutemo Facebook
Emory University wongororo
Join kukurukura pamusoro Emory University.